Midowga Afrika oo go’aan adag ka gaaray Maamulka Milatariga Sudan – Radio Daljir
Midowga Afrika oo go’aan adag ka gaaray Maamulka Milatariga Sudan
Juunyo 7, 2019 7:25 b 0
Kulan deg-deg ah oo ay yeesheen Golaha Amaanka iyo nabada ee Midowga Afrika ayaa waxa ay ka soo saareen go’aan adag oo ka dhan ah Golaha Milatariga ee Maamula dalka Sudan.
Kulanka golaha yeesheen ayaa lagu go’aamiyay in dowlada Sudan laga hakiyo xubinimada Midowga Afrika, waxaana Xubanimada Sudan ee Midowga Afrika shuruud looga dhigay in xukunka lagu wareejiyo dowlad rayid ah.
Qoraal ka soo baxay kulankan ayaa lagu sheegay in Maamulka cusub ee dalka Suudaan laga joojiiyay in ka qaybgasho dhammaan howlaha ee midowga afrika inta laga soo dhisayo xukuumad rayid ah.
Go’aankan ayaa yimid kadib markii Golaha Milatariga dalka Sudan uu joojiyay wadahadaladii uu la lahaa kooxaha mucaaradka iyo dadka banaanbaxaya islamarkaana ay awood u adeegsadeen dadka banaanbaxyada ka dhigaya magaalo madaxda Sudan ee Khartoum.
Ra’iisul wasaaraha Ethiopia oo Khartoum ku wajahan